🥇 ▷ Microsoft waxay u abuurtaa ilo cusub ilo furan barnaamijyadeena taas oo aan ahayn ka qurux badnaanteeduna waa bilaash ✅
Microsoft waxay u abuurtaa ilo cusub ilo furan barnaamijyadeena taas oo aan ahayn ka qurux badnaanteeduna waa bilaash
Koodh Cascadia ayaa bishii May ee la soo dhaafay lagu shaaciyay munaasabada Dhismaha Microsoft waana mid kooban, isha cusub ee shirkadda gaar ahaan loogu talagalay horumarinta. Font a monospaced horumariyey oo ay la socdaan arjiga cusub ee Windows Terminal kaas oo, ereyada kuwa mas’uulka ka ah, “waxay siisaa khibrad wanaagsan xagga khadka taliska iyo tifaftirayaasha code”.
Iyo inaan runta sheego, isha ayaa si qurux badan u qurux badan, in kasta oo loo sameeyay si gaar ah adeegsiga ay xirfadlayaasha horumarku ku siin karaan.
Code Cascadia sidoo kale waa il furan oo leh laysanka furan ee SIL. Oo waa la heli karaa si deg deg ah loogu soo dejiyo GitHub. Nooca hadda la heli karo waa 1909.16.
Nidaamka ‘Cascadia Code’ waxaa ka mid ah barnaamijyada aadka u faa’iido badan ee ligatures
Nooca xiga ee Windows Terminal, haddii ilkan cusub aan si gaar ah loogu rakibin, si otomaatig ah ayaa loo rakibi doonaa. Koodhka Cascadia, marka lagu daro soo bixista gacanta qalabka korantada cusub ee Windows, magaceeda ayaa laga qaadanayaa sida uu shaaca ka qaaday maamulaha mashruuca.
Sababtoo ah magaca “Cascadia Code” wuxuu ka yimaadaa mashruuca Windows Terminal iyo diyaarintiisa. Kahor intaan la bilaabin, magaca koodh-ka Windows Terminal wuxuu ahaa Cascadia. Xaqiiqdiina, sida uu sheegayo barnaamijka Kayla Cinnamon, qaar ka mid ah faylalka isha laga helo ee ku jira kombuyuutarka ayaa wali isticmaala magacaan. Anigoo ah maamuus u sameenaya barta-weyn waxaan jeclaanay fikirka ah in magaca loo bixiyo isha iyadoo la raacayo magaca magaciisa “, wuu hubiyaa.
Cascadia waxay ahayd magaca koongareeska ee Windows Terminal waxayna si xushmad leh ugu shaqeysay kumbuyuutarrada cusub ee Windows isha waxaa loogu yeeray
Si ay naftooda uga dhaadhiciyaan doorashada, waxay baaris ku sameeyeen Twitter iyagoo ay weheliyaan magacyo kale oo la isku shaandheeyay iyo isticmaaleyaashii ka qeybqaadanayay codbixinta ay la midoobeen doorashada Microsoft. “Koodh”, habka agtiisa, ayaa lagu daray in hoosta laga xariiqo in nooca noocan ah loogu talo galay barnaamijyada iyo, dabcan, waxaa ka mid ah xiidmaha aadka u faa’iido leh.
“Xiriirinta barnaamijyada ayaa ka sii faa’ideysan marka la qorayo nambarka, maadaama ay abuuraan glyphs cusub iyagoo isku daraya jilayaasha. Tani waxay gacan ka geysaneysaa ka dhigitaanka koodhku akhrinta iyo fududahay in loo isticmaalo dadka qaar,” Cinnamon ayaa sidaas leh.
La wadaag Microsoft waxay u furtaa ilo cusub ilo furan barnaamijyadeena in ka sokow quruxdu waa bilaash